Dokotra - Wikipedia
Ny dokotra dia karazam-borona an-drano mitovitovy amin'ny ganagana izay voron-dia mora ompiana. Tia manatody anaty lavaka eny amin'ny hazo maniry ny dokotra. Tsy mba mamoaka feo mazava fa misasasasa ny lahin-dokotra, fa ny vaviny kosa mamoaka feo fohy. Misy karazany roa ny dokotra, dia ilay karazany mainty misy fotsy amin'ny elany izay resahina eto, ary ilay karazany fotsifotsy atao hoe dokotra fiompy. Ireo karazany roa ireo anefa dia samy ataon'ny ankamaroan'ny Malagasy hoe dokotra avokoa.
Hita any Amerika Atsimo ka hatrany Meksika ny dokotra. Ahitana azy koa ny ao Goiana. Ahitana azy vitsy ny any Teksasy. Ahitana azy koa ny any Florida ka tsy tena voron-dia loatra izy any satria miaina akaikin' ny toeram-ponenan'ny olombelona. Vorona mora ompiana ny dokotra. Akamban'ny hoditra malefaka ny rantsan-tongony telo aloha ka ahafahany milomano tsara. Ny rantsan-tongony fahefatra aoriana dia kely kokoa noho ireo telo ireo ka tsy dia misy ilany azy loatra.
Mirefy 86 sm ny lahin-dokotra sady milanja eo amelanelan'ny 2,1 kg sy 3,2 kg ary matroka kokoa ny volony sady mamirapiratra manjelatra maitso na mavokely eo amin'ny lamosiny sy ny tratrany, fa ny vavy kosa izay somary kely kokoa dia milanja 0,97 kg hatramin'ny 1,3 kg sady matroka kokoa ka tsy manjelanjelatra tsara ny volony.
Mora fantatra ity karazan-dokotra ity noho ny fisian'ny hoditra miloko mena eo amin'ny lohany, avy eo ambanin'ny vavany ka hatreo amin'ny tendany, indrindra amin'ny lahiny. Rehefa tezitra izy na misy zavatra atahorany dia mitsangana ny volo eo an-tampon-dohany.
Ohabolana malagasy momba ny dokotraModifier
Dokotra homan-kabakabaka: homan-java-tsy mahavoky ny tena.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Dokotra&oldid=980877"
Dernière modification le 9 Martsa 2020, à 21:52
Voaova farany tamin'ny 9 Martsa 2020 amin'ny 21:52 ity pejy ity.